अस्ट्रेलियाको घटनाबाट पिडित मेरा विद्यार्थीहरुको नैतिक जिम्मेवारी लिएको छु मिडियाहरुले अनावश्यक लालछना नलगाइदिनहुन समेत अनुरोध गर्दछु – टन्डन – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
नेपालबाट उच्च-शिक्षाको लागी बिदेश पढ्न जाने गन्तव्यको रुपमा अस्ट्रेलिया निकै अगाडी देखिन्छ। पछिल्लो समयमा अस्ट्रेलियामा घटेको एक घटनाले गर्दा नेपालि विद्यार्थी, अस्ट्रेलियाको बर्तमान शैक्षिक परिवेश, अवसर-चुनौति र परामर्श ब्यबसाय क्षेत्र आजको तातो बहसको विषय हुन गएको छ । नेपालबाट उच्च-शिक्षाको लागी बिदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । यो क्रम-संगै विद्यार्थीहरुलाई सो सम्वन्धमा परामर्श सेवा दिने कन्सल्ट्यान्सीहरु पनि उत्तिकै छन् । यस्तो भिडभाडमा सहि र गलत कन्सल्ट्यान्सीहरुको पहिचान आम विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुका निम्ति चुनौतीको विषय हो । यसरि शैक्षिक परामर्श लिनका निम्ति कुन संस्था राम्रो, कुन नराम्रो हो ? छुट्याउननै गार्हो देखिएको छ ।
यो परामर्श-सेवा अहिले आएर बिजिनेस् इन्डस्ट्रीको रुपमा बिकाष भैरहेको छ । यो क्रममा राम्रा सङ्सगै नराम्म्रा पक्षहरु पनि भित्रीने गरेका छन । यसको नियन्त्रणका निम्ती सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान जानु अत्यावस्यक छ । जस्तो झुटो प्रचार-प्रसार, अफवा-बिज्ञापन लागायतका कुरालाई कानुनी तवरले नियमन गर्नु पर्ने हुन्छ । छोटो समयको ब्यबसय गर्ने, बजारको फ्लोसँग दौडिने व्यवसायीहरुले गर्दा एक त सिङो इन्डस्ट्रीको नाम खराब हुने भयो । अर्को सबै भन्दा मुख्य कुरा विद्यार्थीको भबिस्य डामाडोल हुने भयो । बिदेस पढ्नजाने विद्यार्थीहरुको बास्तबिक समस्याहरु पहिचान गर्ने कार्य अत्यन्तै जटिल छ । अनुभबको आधारमा त्यसको समाधान खोजिनु आजको आवस्यक्त हो । विद्यार्थी र अभिभावकहरुले परामर्शदाता छान्नु भन्दा पहिले उसको ब्याग्राउन्ड, उसले गरेका कामहरु अनि भन्दै गरेका कलेज तथा युनिभर्सिटीहरुको बैधानिक एजेन्ट हो ? या होईन ? लगायतका कुराहरु भेरीफाई गरेर मात्र प्रकृया अगाढी बढाउन युक्ति संगत हुन्छ । त्यसै गरी बैधानिक प्राबधानका निम्ती कन्सल्टेन्सीको छाता संगठन तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि सुचना लिन सकिन्छ । सैक्षिक मेलाहरु तथा सेमिनारमा कलेज तथा युनिभर्सिटीहरुको आधिकारिक प्रतीनिधीलाई भेटेर स्पस्ट हुन सकिन्छ । जसले गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आफ्नो गन्तब्य पुग्न सुरक्षित र सहजता प्रप्त हुन्छ।
गत हप्ता अस्ट्रेलियामा एक प्राइभेट कलेजको खारेजीको विषय चर्चाको चुलीमा थियो । नेपालबाट नरसिङ्गमा आफ्नु भबिस्य खोज्दै उच्च-शिक्षाका लागी अस्ट्रेलिया पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको करियर माथि यसले प्रश्न चिन्ह खडा गरको पाईयो । यसका जिम्मेवार र जवाफदेही पक्षहरु बहुसंख्यामा भए पनि हाल कन्सल्ट्यान्सीहरु अचानोमा परेको देखियो । यसै क्रममा आरोप र लान्छना लागाईएका संस्था मध्ये मर्षी एजुकेसन पनि एक हो ।
पछील्लो समयमा अस्ट्रेलिया फोकस् भएर मर्षी एजुकेसनले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई शैक्षिक परामर्श दिंदै आएको छ। त्यसैगरी मर्षी आफ्नो ब्यवासायलाई थप फराकिलो बनाउने देखी गुणस्तरीयता र नैतिकवान बनाउने सवालमा निकै आक्रमक ढङ्गले अघी बढिरहेको देख्न सकिन्छ। यस संसगैका अरु दुईवटा देशहरु क्रमस: अमेरिका र क्यानडाका लागि पनि मर्षी एजुकेसनले शैक्षिक परामर्श दिंदै आएको छ । अस्ट्रेलिया शैक्षिक गन्तब्य प्रोमिटको पालादेखीनै मर्षी यो क्षेत्रमा निरन्तर अनुभबले विद्यार्थी र अभिभावकलाई सही परामर्श दिने कुरामा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको छ । तर पछिल्लो समय घटेको यस घटनाबाट आफु अत्यन्त दुखि रहेको कुरा कन्सल्तेंसिले यस अघि नै जनाइसकेको छ । यो सगै मर्सिले पछिल्लो समय आम बिद्यार्थी र अभिभाबकप्रति कमाएको जुन बिश्वास छ त्यो कत्ति पनि कमि हुन नदिन अहिले अहोरात्र लागि परेको पनि जनाएको छ ।
नेपालि विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेको अस्ट्रेलियास्थित एआइबीटी कलेजको खारेजीको विषय र त्याहा आफ्ना विद्यार्थीको अवस्थाबारे मर्षी एजुकेसनका संचालक राम टन्डन भन्नुहुन्छ:-
“यो अत्यन्तै दुखद, अप्रत्यासित र नौलो किसिमको दुर्घटना घट्न गएको छ । यस घटना र आम पिडित विद्यार्थीको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर म आफै पनि यता ‘अस्ट्रेलिया’ आएर विद्यार्थीहरुसंग निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहेको छु। विद्यार्थीका अभिभावकहरुलाई धर्यधारण गर्न अनुरोध गर्दछु । आफ्नो सस्थाबाट गएका विद्यार्थीहरुको करियर सुनिस्चितता प्रति मर्षी एजुकेसनले सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी लिनेछ भन्न चाहन्छु । संयमता र धर्यता साथ हामि सबै मिलेर यस घटनाबाट न्यायोचित निकास निकाल्ने नै छौ भन्ने कुरामा म पूर्ण बिस्वस्त छु । यसलाई एउटा सोच्दै नसोचेको दुर्घटनाको रुपमा विद्यार्थी र अभिभावकले बुझ्नु पनि जरुरि छ र उचित समाधानको बाटो नपहिल्यानुजेल आफुले परामर्श लिएका सस्था र कलेजसग निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहन समेत आग्रह गर्दछु। यसका साथै अहिले नेपालमा जुन किसिमले परामर्शदाताहरुलाई केहि मिडियाहरुले यस घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारको रुपमा कन्सल्टेन्सीलाई मात्र ठगिको संज्ञा दिदै दोषी ठहर्याउने हर्कत रचिएको प्रति हामि सहि बाटोमा हिडिरहेका परामर्शदाताहरुलाई अत्यन्त दुखित र मर्माहित बनाएको छ । सेवा गर्ने सवालमा समय, काल, परिस्थिति अनुसार कहिलेकाही मानिसका केहि त्रुटीहरु अवस्य हुन्छन् त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्दता जनाउने र घटनाको नैतिक जिम्मेवार लिनु नै महानता हो, जुन मैले गरिसकेको छु । त्यसैले म मेरा आम विद्यार्थी र तिनका अभिभावक ज्युहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने; यस्ता अफवाहको पछि नलागी यथार्थता बुझीदिन पुन अपिल समेत गर्दछु, र म आफै यस घटनाबाट मेरा विद्यार्थी भाइ-बैनीहरुलाई पार लागाउन स्वयं घटनस्थलमै पुगेर दिनरात पहलको लागि लडिरहेको जानकारी गराउदै अन्यथा नसोचिदिनुहुन या नबुजिदिनुहुन अनुरोध समेत गर्दछु”